Fidirana fanaraha-maso Martinique hisorohana ny fanaparitahana COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Fidirana fanaraha-maso Martinique hisorohana ny fanaparitahana COVID-19
Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique, ny Port of Martinique, ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Martinique dia manara-maso akaiky ny toerana nidiran'ny nosy hisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus COVID-19 ary miantoka ny fiarovana ny mponina sy ny mpitsidika azy.
Araka ny notaterin'ny talen'ny Regional Health Agency's (ARS), ity nosy ity dia mijanona ao amin'ny dingana 1 amin'ny alalàn'ny fisorohana dingana 3 natsangan'ny governemanta frantsay tamin'ny taona 2009 taorian'ny valanaretina gripa H1N1. Ny dingana 1 dia fisorohana ary efa misy ny lamina sy ny fepetra fiarovana.
Ny mpandeha fitsangantsanganana an-tsambo rehetra dia arahi-maso. Anchorage, ho tonga eny amoron-dranomasina ho an'ny sambo rendrarendra kely kokoa, dia tsy avela intsony. Tsy maintsy mandeha any amin'ny tobin'ny seranan-tsambo izy ireo hijerena ny maso ivoho misahana ny fahasalamana any Martinique. Ny protokol fiarovana dia apetraka ary ampiharina amin'ny marinas sy seranana kely rehetra.
Hatramin'ny alakamisy 5 martsa 2020, ny fepetra momba ny fidiovana dia ampiharinin'ny Regional Health Agency of Martinique miaraka amin'ny fisian'ireo mpamono afo.
Hatramin'ny 29 Febroary 2020, ny fampandrenesana fisorohana dia navoaka tao amin'ny seranam-piaramanidina ary nanomboka ny 4 martsa lasa teo dia nomena ireo mpandeha fiaramanidina ireo mialoha ireo.
Napetraka tao amin'ny seranam-piaramanidina ny mpanara-maso fidiovana fanampiny
Ny hopitaliben'i Martinique dia vonona amin'ny fiovana rehetra amin'ity krizy ara-pahadiovana ity, ireo tobim-pivarotana mitokana ary nanitatra ny fahaizany mandinika
Tamin'ny 10 martsa, tranga 3 voamarina amin'ny COVID-19 no nambaran'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-paritra (ARS) tany Martinique. Ireo tranga 3 ireo dia mitoka-monina ao amin'ny Hopitaly CHU Martinique, La Meynard, ao amin'ny sampana quarantine manokana sy voaro.
Ny fizarana krizy dia nampandehanan'ny ARS avy hatrany, mba hikarohana, hamantatra ary hanaraha-maso ireo trangam-pifandraisana: ireo olona izay nifandray akaiky sy naharitra tamin'ny marary voan'ny aretina.
Eo am-piandrasana ity valan'aretina eran-tany ity, ny ARS sy ny Hopitaly CHU Martinique dia niomana am-pahavitrihana raha misy tranga voamarina ao amin'ny nosy.
Raha niresaka momba an'io lohahevitra io ny talen'ny Fahefana misahana ny fizahan-tany Martinique, Andriamatoa François Languedoc-Baltus dia nanamarika fa "tena zava-dehibe ny fahafantaran'ny vahininay fa vonona ny tompon'andraikitra isam-paritra sy fizahan-tany ary nandray tamin'ny herinandro farany ny dingana rehetra ilaina hisorohana sy hifehezana ny viriosy. ” Nanampy izy fa "Martinique dia iray amin'ireo hopitaly tsara indrindra sy rafitra fitsaboana any Karaiba - mitovy amin'ny tanibe Frantsa sy ny EU"
Mandritra izany fotoana izany, ampahatsiahivina ny mponina sy ny mpitsidika ao an-toerana mba hanaraka ny tolo-kevitra napetraka hisorohana ny aretina. Anisan'izany ireto:
Fanasana tanana tsy tapaka amin'ny savony sy rano na fanadiovan-tanana mifototra amin'ny alikaola
Sarony amin'ny tavy ny oronao sy ny vavanao rehefa mikohaka na mievina ianao ary ario rehefa avy ampiasaina na mikohaka na mievina amin'ny kiho fa tsy ny tananao.
Aza mifanerasera akaiky amin'ireo olona mampiseho soritr'aretina amin'ny taovam-pisefoana toy ny kohaka sy ny fitsikana.
Raha manana soritr'aretina gripa ianao dia aza mankany amin'ny dokotera na hopitaly hialana amin'ny fihanaky ny viriosy fa miantso ny serivisy vonjy maika, ny SAMU (dial 15) ary zarao ny tantaram-pitetezanao. Handefa manam-pahaizana manokana izy ireo handinika ny soritr'aretinao.
Raha mila vaovao farany sy vaovao misimisy momba ny COVID-19 sy ny fepetra napetraka tany Martinique dia tsidiho azafady ny tranokala ARS http://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Les-informations-sur-le-Coronavirus-COVID-19
Namoaka ny fanamarihana momba ny famerenana amin'ny laoniny ny hetsika fizahan-tany ny Oganda Wildlife Authority
Ny praiminisitra italiana dia nanambara ny fanidiana ny hetsika ara-barotra rehetra